Apple Maps "Jereo ny manodidina" dia manohy manampy toerana, amin'ity Etazonia ity | Avy amin'ny mac aho
Apple Maps "Jereo ny manodidina" dia manohy manampy toerana, amin'ity indray mitoraka ity any Etazonia
Tsikelikely, mitohy ny fahatongavan'ireo faritra vaovao izay ampandehanana ny "Look Around" asan'ny Apple Maps. Amin'ity tranga ity, ny orinasa Cupertino dia manampy an'ity karazana sary ity amin'ny fomba fijery 3D ho an'ny mpampiasa any Phoenix, Arizona.
Ity asa ity dia tsy zava-baovao ao amin'ny Apple Maps ary tsy vaovao amin'ny sari-tanin'ny Google Maps mpifaninana aminy indrindra, fa ny fanampiana an'ity karazana sary ity dia mitaky asa sy logistika betsaka amin'ny orinasa sy Amin'ity tranga ity dia afaka milaza isika fa dingana iray mialoha i Google.
Fijerena tsotra izao ny sarin'ny arabe ao amin'ny Apple Maps miaraka amin'ny fomba fijery 3D fa fiasa mahaliana ho an'ny mpampiasa maro izay te-hahita toerana voafaritra tsara, ny tena itovizany amin'ny fanatrehana ny arabe. Amin'ity tranga ity dia ampiana ao Phoenix izy io ary misy amin'ny toerana 14 hafa manerantany: San Francisco, Seattle, Los Angeles, Tokyo, Las Vegas, Houston, London, New York ary Oahu. Ny herinandro lasa teo ity karazana fahitana amin'ny sarintany Apple ity dia tonga tany amin'ny toerana sasany any Dublin sy Edinburgh.
Fantatsika fa Apple dia manampy toerana bebe kokoa ary miasa tsikelikely izy io mba hanampiana maro hafa, fa tsy amin'ny taha izay tadiavin'ny maro. Raha fintinina, fanatsarana ho an'ny Apple Maps izay azonao antoka fa hampiasa fotoana fohy ianao hahitana antsipiriany manokana momba ny toerana iray. Mazava izany Apple Maps ankehitriny dia manana toerana malalaka hanatsarana azy amin'ity lafiny ity, ary izany no antony tokony hijerentsika ny vaovao ho avy, na dia tsy manohina antsika akaiky aza izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Apple Maps "Jereo ny manodidina" dia manohy manampy toerana, amin'ity indray mitoraka ity any Etazonia
Alexa dia mamela ny fihainoana podcast any Espana amin'ny alàlan'ny Apple Podcasts
Hanomboka amin'ny Novambra ny AirPods Studio Araka ny tsaho farany